Ọ bụ nchekwa nke aluminom niile na-ekwe nkwa otu esi rụkwaa |
Ihe mkpuchi aluminom maka oke-spe
Akpụkpọ ụkwụ aluminom na-arụ ọrụ
Ihe mkpuchi aluminom maka akwa
Ihe mkpuchi aluminom maka moto
Akụkụ igwe kwụ otu ebe
Ọzọ aluminom forg
Akụrụngwa akụrụngwa ngwa
Ngwa ngwa oku
Aluminumlọ ọrụ aluminium manta
Ngwa ụgbọ ala USB
Aluminom alloy extrusion
Bụ nchekwa nke aluminum dum na-ekwe nkwa otu esi arụzi
Dynamiclọ ọrụ na-agbanwe agbanwe
Ojiji nke aluminom na ugbo ala na-egosiwanye mmụba na-eto eto kwa afọ. Enwere ọtụtụ ụdị nke eji aluminom na akụkụ ma ọ bụ dum. Transmissiongbọ njem ụgbọ ala na-eji ihe eji arụ ọrụ nke aluminom, nke ọ bụghị naanị na ọ nwere ike zuru oke na ike, kamakwa nwee ezigbo nrụpụta ọkụ. Eziokwu egosiwo na ojiji nke aluminom n'ime ugbo ala enwetala ezigbo elele nke ndi mmadu na nke aku na uba.
Automotive aluminum alloy nchekwa
1, aluminom eweta bughi uru, ígwè dịkwa oké mkpa
Dị ka a maara mmadụ niile, jiri ya tụnyere nchara nkịtị, ngwongwo aluminom nwere ike ịkọ ọdịnihu nkukota na mbido imewe, ma hụ na nhazi ahụ na ọnọdụ nkwekọrịta echekwara. Ya mere, akụkụ aluminom nwere ike melite nchekwa ụgbọ ala ruo n'ókè ụfọdụ ma nweta arụmọrụ ka mma na nnwale ọnwụ.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ nke ike mkpụrụ nke alloy alloy nwere ike iru ihe karịrị 500-600 mpa na ikike izugbe ike ígwè akụkụ, ma na ụfọdụ mkpa dị mkpa, ka na-adịghị mma dị ka ike nke elu ike ígwè, ya mere na akụkụ ụfọdụ dị mkpa ga-ejikwa ike dị elu nke nkwalite ígwè, dịka nsoro rover aluminum body, na 4% nke ike dị elu na 1% nke thermoforming ultra-high steel.
2, ibu Mbelata braking njikarịcha, nchekwa akara na a elu
N'ezie, nchekwa nke aluminom abụghị naanị na-egosipụta na usoro na njirimara ihe onwunwe, kamakwa ọ na-ekere oke oke na braking na njikwa nke ụgbọ ahụ. Ngwongwo F-150 nke Ford, dịka ọmụmaatụ, na-atụle 318kg ihe na-erughị onye bu ya ụzọ n'ihi akụkụ ahụ ya niile. Inertia ụgbọala ahụ abụrụla nke belatara ma belata braking ebelatala nke ukwuu. Ọ bụ ya mere F-150 ji nweta ọkwa nchekwa kpakpando ise kacha elu site na National Highway Traffic Safety Administration, nke na-enye ya ọkwa nchekwa dị elu karịa ụdị ndị ọzọ. Ma ebe ọ bụ na aluminom nwere njirimara nke nkwụsị nke corrosion, ọ nwere ike inye ụgbọala ahụ ezigbo ndụ ndụ.
Ihe akụrụngwa chọrọ maka mmezi ahụ nke aluminom
1. Special gas echebekwa ịgbado ọkụ igwe na udi idozi igwe nke aluminum ahụ
N'ihi ala agbaze nke aluminom, ngbanwe dị mfe, ịgbado ọkụ chọrọ nke dị ugbu a, yabụ ga-ejikwa igwe ahụ pụrụ iche na-ekpuchi gas. Repairdị mmezi igwe enweghị ike ịdị ka igwe igwe mmezi nkịtị ịpị ma dọpụta, nwere ike jiri sọmịịlị ahụ pụrụ iche mmezi igwe na-agbado ọkụ ntu, na-eji mgbatị imi ntu maka ịbịaru.
2. Ngwongwo ihe eji emeghari ahu nke aluminom na egbe di ike
Dị iche na ngbanwe ụgbọ ala ọdịnala ọdịnala, mmezi nke aluminom bụ nke kachasị site na usoro riveting, nke ga-enwerịrị egbe egbe siri ike. Ma rụkwaa aluminom ahụ ngwaọrụ ga-raara onwe ya nye, enweghị ike agwakọta ya na mmezi nke ígwè ngwaọrụ. Mgbe ịmechara ahụ dị nchara, a ga-ahapụ ihe mkpofu na ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ejiri ya rụzie ahụ nke aluminom, a ga-etinye ígwè mkpochapu n'ime ala aluminom, na-eme ka aluminom mebie.
3. Bọmbụ gbawara agbawa na-àmà ájá achịkọta na agụụ usoro
Na usoro nke na-egbu ahụ nke aluminom, a ga-enwe ọtụtụ ntụ ntụ aluminom, ntụ ntụ aluminom abụghị naanị na-emerụ ahụ mmadụ, kamakwa ọ na-ere ọkụ ma na-agbawa agbawa, yabụ ọ dị mkpa ịnweta mkpokọta ntụ na-agbawa agbawa na usoro nhicha banye aluminom ntụ ntụ n'oge.
4. Oghere mmezi nke onwe
N'ihi ihe siri ike nke usoro mmezi ahụ nke aluminom, iji hụ na nchekwa nke nchekwa na nchekwa nke nchekwa, iji zere ntụ ntụ aluminom na mmetọ ogbako ahụ na mgbawa, ọ dị mkpa ịtọlite ​​ebe dị iche iche nke aluminom. Tụkwasị na nke a, ndị ọrụ nlekọta ahụ ike nke aluminom iji mezuo ọzụzụ ndị ọkachamara, na-achịkwa mmezi nke usoro mmezi ahụ, otu esi edozi eserese, ịgbado ọkụ, riveting, bonding na na.
Rịba ama maka ọrụ mmezi nke aluminom
1, aluminum alloy plate local tensile adịghị mma, dị mfe ịgbawa. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi na ọdịdị nke efere dị n'ime nkpuchi nke engine dị mgbagwoju anya karị, iji meziwanye nrụrụ nrụrụ nke ahụ n'oge nrụpụta nke alloy siri ike, elongation ahụ akarịala 30%, ya mere na mmezi ahụ. iji hụ na ọdịdị ahụ agbanweghị ka o kwere mee, iji zere mgbawa.
2. Dimension ziri ezi adịghị mfe nghọta, na nlọghachi siri ike ịchịkwa. Usoro nke ịhapụ nrụgide site na ikpo ọkụ ọkụ dị ala kwesịrị ịnakwere dị ka o kwere mee na mmezi iji mee ka ọ kwụsie ike na-enweghị nsogbu nrụrụ nke abụọ dịka springback.
3, n'ihi na aluminom dị nro karịa nchara, nkukota na adhesion ájá dị iche iche na mmezi ga-eme ka akụkụ akụkụ mebie, ncha na ntụpọ ndị ọzọ, yabụ ọ dị mkpa iji mezie nhicha ahụ, ihicha akụrụngwa, uzuzu gburugburu ebe obibi, mmetọ ikuku na akụkụ ndị ọzọ mee usoro kwesịrị ekwesị iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke akụkụ ahụ.
N'ihi uru nke arụmọrụ ya, a na-ejikarị alloy alloy eme ihe na ahụ ụgbọ ala, enwere ike ijide nchebe nke alloy aluminum. Na mgbakwunye, mmezi ahụ ụgbọ ala dịkwa mma, maka nkọwa ndị ọzọ biko kpọtụrụ anyị.
Post oge: Nov-01-2020
Kunshan Chenshun aluminum ibe ya bụrụ Co., LTD